Kutsvaga Yepamusoro Yemhando Rehab Wiricheya
Kune chero munhu achigadzirisa mushure mekukosha kuipa uye uchida kufamba-famba, kugadzirisa wiricheya mudziyo unodiwa. Izvo zvinobatsira munhu kuti adzokere kuhupenyu hwekuwedzera kufamba nekuvagonesa kushandisa mavhiri kuti aende nyore nyore kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe.
Kare, saizi imwe chete inokodzera-zvose mavhiripu vaiva pamusika. Nekuda kwekuvandudzwa kwesainzi uye tekinoroji, vagadziri vanotungamira vasimuka kushandura hupenyu uye kugadzirisa macheya ezvido zvakasiyana. Vatengesi vanopa akawanda marudzi emacheya kune chero ari kutsvaga kudzoreredza kufamba muhupenyu hwavo hwezuva nezuva.
Kana iwe ukave uri pakati pevaya vanodzokera kumararamiro ehupenyu uye kutsvaga kugadziriswa wiricheya, zvitoro zvekurapa zvine rondedzero inoshamisa, iyo inosanganisira echinyorwa, emagetsi, akaomarara furemu, yekupeta furemu, nezvimwe. Chimwe nechimwe cheizvi chinoitirwa chishuwo chakasiyana. Bvunza nachiremba wako kuti uone kuti ndeipi sarudzo yakanaka kuti ikwane zvaunoda.
Mhando mbiri dzekutanga dze wiricheya zviri zvemanyorerwo uye simba remagetsi. Manual chair zvinobatsira kuzvisimudzira pamberi pako wega. Mumwe munhu anogona zvakare kupa kufamba nekusunda chigaro.
manyuwari mavhiripu anogadzirwa kunge ari kupeta chimiro kana kuti rigid furemu. Kana iwe uchitsvaga yakareruka sarudzo uye imwe inogonesa iwe nhamba yezvinzvimbo pakugara kwako, furemu yakaoma. wiricheya ingava sarudzo yakanaka. Kupeta furemu mavhiripu zvose zviri zviviri zvinorema uye zvine zvakawanda zvinoriumba.
Rumwe rudzi rwe bhuku rehabhairicheya ndiro kurereka-munzvimbo-wiricheya. Ichi zvirokwazvo chishandiso chinobatsira kune vanhu vanoda rubatsiro nekuronga uye nhanho yekufamba. Chikanganiso ndechekuti inorema uye yakaoma kwazvo kuisa mumotokari.
Simba rehabhairicheya zvinobatsira kufambira mberi kushandisa simba rekunze. Zvigaro izvi pano neapo zvinosanganisira joystick inokutendera iwe kudzora nzira yauri kuenda nayo.
Imwe yekuwedzera imwe nzira ye kufamba kwaizove kuisa magetsi-anobatsira mavhiri kune echinyorwa rehab wiricheya. Izvi zvinoita kuti chigaro chiitwe nyore kufamba. Nekudaro, kudzora chigaro ichi, munhu wacho anoda imwe nhanho yehunyanzvi.
Kana iwe uchida kugadziriswa kwakanaka wiricheya, vatengesi vakawanda vezvokurapa vari pamhepo nepamhepo, vanopa marudzi aya e mavhiripu nemimwe midziyo inobatsira nayo kufamba. Vatengesi vepamhepo nevekunze vanogona kupawo zvemunhu mavhiripu kune zvinodiwa nemushandisi zvakasiyana.